Archive du 20181002
Marc Ravalomanana Manampy ny Tantsaha
Ny tarigetranay mivady hatrany am-piandohana, dia ny “hanangana”, tsy ho fihariana fotsiny fa ho fanasoavana ny mpiara-belona, araka ny hira fanevan’ny Vondrona Tiko, hoy i Marc Ravalomanana.
Fifidianana 2018 Misy miketrika hala-bato bevata
Herinandro tsy hirosoana amin’ny propagandy isika amin’izao fotoana, saingy misy ny mpanao politika, eny fa ny kandida mihitsy aza mametraka ny ahiahiny amin’ny resaka tsy fangaraharana, indrindra eo amin’ny lisi-pifidianana.
Antoko MFM « Tsy namanay ny mpanao ampihimamba ! »
Teto Analamanga no namaranan’ny antoko politika Mpitolona ho an’ny Fandrosoan’ny Malagasy ( MFM) ny filankevi-paritrany omaly.
Fiatrehana ny fifidianana “Kikina” sahady ny kandidà sasany
Dimy andro mialoha ny fampielezan-kevitra izao dia efa misy sahady ireo kandidà milaza fa lany vola.
Nahoraka ho tsy nampifanara-tsaina ny avy eo anivon’ilay vondrona politika iray manohana ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, na ny Voromahery ny tsy fanekena ny fampidirana ny resaka antoko Hery vaovao ho an’i Madagasikara na HVM tao anatin’ity vondrona iray ity
Tsy mitsitsy vola aman-karena i Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao, ka manao izay fomba rehetra hahalany azy indray ho filoha. Tombanana avy hatrany ho tandindon’ny ho avy satria mbola tsy propagandy aza dia efa mampiseho fa manana ary afaka manao fampitaha raha vola no resahina.
Kandida manaratsy ny hafa Voasazy ary mety mihintsana avy hatrany
Andro vitsivitsy sisa no isaina dia hilona tanteraka ao anatin’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena isika eto Madagasikara.
Lalandy Andriamitosy “Ny fifidianana ihany no tokony hifampiraharahana amin’ny vahiny”
Nanome torohevitra ireo mpitondra hitantana ny firenena i Lalandy Andriamitosy omaly, manoloana ny fanjakazakazan’ny vahiny eto amin’ny tanintsika.
Fifidianana sy raharaham-pirenena Tsy mitsabaka ny Sinoa, hoy ny Masoivohony
Ankalazaina isaky ny 1 oktobra ny fetim-pirenen’i Sina, ka tsy namela izany fotsiny ny teto Madagasikara, fa nankalazaina omaly teny amin’ny Masoivohon’i Sina teny Ankerana ny faha-69 taona nijoroan’ny Repoblika Entim-bahoakany.
Antenaina hitondra soa
Volana oktobra, volana vaovao. Antenaina hitondra soa, ho ahy sy ho anao. Maniry mafy aho, mba samy ho velon'aina soamantsara Ny Malagasy tsy an-kanavaka, erak'i Gasikara.
Fakon’Antananarivo Tsy avy amin’ny kaominina mihitsy ny olana
Nitondra fanazavana momba ny fanalana fako ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo tamin’ny alalan’ny lefitra voalohan’ny Ben’ny tanàna Kolonely Ramboasalama Emilien, omaly.
Fiantsoana fikomiana Nakatona ny “Fréquence Menabe” Morondava
Any Morondava omaly alatsinainy 1 oktobra ary nijery ny zava-misy marina any an-toerana ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao narahana delegasionina mafonja avy amin’ny governemanta.
CNaPS Nosokafana ny Tendro any Ifanadiana
Ho fanalana ny fahasahiranan’ny mponina any Ifanadiana izay kaominina any amin’ny 423 km Atsimo Atsinanan’Antananarivo,
JMJ Mada Hentitra ny fanaraha-maso amin`ny fahadiovana
Tanora manodidina ny 50 000 no andrasana mandritra ny fihaonamben’ny tanora katolika JMJ Mada andiany faha-9 hatao any Mahajanga.
Jean Ignace Randrianirina (Ramasy) “Mampanahy ny ho avin’ny kitra Malagasy”
Miisa 9 ireo maniry ho filoha vaovaon’ny federasionin’ny baolina kitra Malagasy na ny FMF amin’izao fotoana, hoy ny filohan’ny fikambanana K2HB, Jean Ignace Randrianirina na Ramasy.
Basket Tompondaka 2018 sokajy U 16 Nanao pao-droa ny Mb2All Analamanga
Nifarana ny alahady teo tany Farafangana Faritra Atsimo Atsinanana ny fifaninanana basket fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara sokajy U16 lahy sy vavy rehefa naharitra 9 andro be izao.
Tounoi de Boules Jeune TIM Ambodimanga Lasan’ny ekipan’i Kambana ny ondry sy amboara
Mba ho fanentanana an’ireo tanora TIM firaisana Ambodimanga ao Toamasina tampon-tanàna mba tsy hipetrapetra-potsiny na ho varimbariana fahatany manoloana ny fifidianana ho filoham-pirenena hatrehana amin’ny 7 novambra izao dia nikarakara fifaninanana tsipy kanetibe :
Hahay mailo tokoa anie !
6 andro sisa dia ho tonga indray ny “fety”. Fety tokoa moa izany, araka ny filazan’ny mpanao politika sasany azy. 1 volana mety hahazoana vola sy hena ary fitafy “isan-karazany” amin’ireo “malalatanana mandalo” indray.
.Mitohy hatrany ny fankalazana ny faha-30 taona niakaran’i Bodo sy Rija Ramanantoanina an-tsehatra.
Ho an’ny Malagasy rehetra ny fankalazana iraisana ny Taom-baovao izay efa niditra tamin’ny fanamarihana fanindroany tamin’ity taona ity.
Nampahafantarina teny Ankatso afak’omaly ny fitsanganan’ny tranom-pamokarana ara-tserasera “Metatron production” hisandrahaka amin’ny asa famokarana horonantsary sy raki-peo isan-karazany.
Raikitra koa ny fisavana entan’ny mpandeha taksibrosy ataon’ny zandary.
Tsy izahay mihitsy no haminany izay efa ho lany sahady amin’ity fifidianana ity, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko HVM, Mohamed Rachid,
Zokiolona Malagasy Betsaka ireo mbola misedra olana
Betsaka ireo zokiolona mbola misedra olana eto amin’ny firenena, indrindra ireo tsy manan-janaka. Saika tsy manana mpikarakara avokoa mantsy izy ireny amin’ny androm-pahanterany, hany ka betsaka ireo mivelona amin’ny asa fangatahana eny amoron-dalana.
Tsy fananan’asa eto Madagasikara Mitombo hatrany isan-taona
400 000-500 000 eo ny tanora mivoaka amin’ny fampianarana isan-taona saingy tsy maharaka ny tsenan’ny asa ka mahatonga ireo tsy an’asa marobe.